Padamyar FM on Stitcher
Putting your love, trust and understanding to each other little by little, day by day is the perfect recipe forastronger relationship. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ နားလည်ပေးမှုတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီ၊ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပေးဆပ်ပျော်ဝင်နေစေခြင်းက ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲတဲ့။ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက် နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုအရာတွေကအဓိကလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုပြောပြထားပါတယ်။ ဒီအရာတွေက ဘာကြောင့်လိုအပ်နေသလဲဆိုတာကို အကျယ်တဝင့်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်တံ့ကောင်းမွန်နေစေဖို့အတွက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မေတ္တာတရားနဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်ကြားမှာမေတ္တာတရားကိုအရင်းခံပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ ရှင်သန်နေဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာသာမရှိဘူးဆိုရင် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကလည်း ဘယ် နည်းနဲ့မှ ကြာရှည်ရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ် ပါဘူး။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ နှစ်ယောက်ကြားမှာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်မှု ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဟာခိုင်ခံ့မှုမရှိတဲ့ကြိုးတံတားတစ်ခုမှာ လမ်းလျှောက်နေရသလိုပါပဲ။ ဘယ်အချိန်မှာပြတ်ကျသွားမလဲဆိုတာကိုရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ နေ့ရက်တိုင်းမှာအသက်ဆက်နေရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ တစ်ယောက် ကိုတစ်ယောက်ကယုံကြည်နေရအောင်လည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကသစ္စာတရားကိုအရင်းခံပြီးဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတစ်ခုဆိုတာကလည်းဆောက်တည်ဖို့သာခက်ခဲပေမယ့် ပျက်စီးသွားဖို့ဆိုတာကတော့ တကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကိုသစ္စာတရားကိုအခြေပြုလို့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရပါမယ်။
နေ့စဉ် လူမူဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် အကြံပြုချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမယ့် Let's Do It အစီအစဉ်..... ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မငုဝါနှင့် မဆိုင်းနွယ်တို့က လွယ်ကူပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ့် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှထားလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
Each heart has some pain only the way of expression is different. Some hide it in their eyes while some hide it in their smile. လောကမှာရှင်သန်ရပ်တည်နေတြ့ ပုတုဇဉ်လူသားဖြစ်နေသေးသရွေ့ အပူမီးတွေကိုခံစားရမှာပါပဲ။ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာအတွက် နေ့စဉ်နဲ့အမျှရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရင်းနဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ နဲ့ အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ ပူပင်သောကတွေကိုပါ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေအနေနဲ့ အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုခံစားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုခံစားတတ်တဲ့အသည်းနှလုံးရှိနေခြင်း ကြောင့်လည်းလူတွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမှာကောင်းကျိုးတွေ အများကြီးဖြစ်ထွန်းခဲ့သလိုရင်နာစရာရင်နင့်စရာအဖြစ်ဆိုးတွေ လည်းအများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရင်ထဲ က နာကျင်မှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ တခြားသောပယောဂတွေ ကိုမှတ်တေးပြီးအမုန်းမီးအာဃာတတွေ လောင်ကျွမ်းလို့ ကလဲ့ စားဆိုတဲ့ မဆုံးတဲ့ သံသရာတစ်ခုရဲ့ ပူလောင်ခြင်းတွေကို စတင်ခဲ့ ကြသူတွေကလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကိုရန်ခြင်းတုန့် နှင်းခြင်းနဲ့ စစ်ပွဲတွေလည်းဒီကမ္ဘာမှာများခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတောင် ကိုယ့်အပေါ်ပူလောင်စေမယ်ဆိုရင် အဲဒီအမုန်းတရားအာဃာတတွေနဲ့ သားစဉ်မြေးဆက် ဆက်လက် လောင်ကျွမ်းနေဦးမယ်ဆိုရင် အမုန်းတရားတွေရဲ့ လောင်မြိုက်မှုနဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာလည်းအေးချမ်းမှုဆိုတာမရှိနိုင်တောပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရင်ထဲကနာကျင်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှ မေ့ထားလိုက်ပါ။ လူတိုင်းအပေါ် မှာမေတ္တာတရားကိုအခြေခံတဲ့စိတ်ထား ကိုမွေးမြူဆက်ဆံတတ်ပါစေ။ ပြောသမျှဝေဖန်သံတွေ၊ အပြစ်တင်သံတွေကိုအပြု သဘောအနေနဲ့ ခံယူတတ်ပါစေ။ ဒါတွေကတော့ နာကျင်မှုကိုတနည်းတဖုံပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့နည်းတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
I'm I'maGYM Trainer....... I'm...????? သင်ကရော ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ??? GYM Trainer ကောင်းဖြစ်ချင်ကြတဲ့သူတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ် လှပစေချင်တဲ့သူတွေအတွက် သိလိုသူများကို မေးမြန်းဖို့ လေ့လာချင်သူများကို Padamyar FM Facebook Page ကနေ မေးမြန်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်.... GYM Trainer ဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓာ Fix ဖြစ်စေချင်ရုံသာမက၊ ကျန်းမာရေး၊အစားအသောက် အတွက် လေ့ကျင့်ပေးရတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်၊ ယခုတစ်ပတ်မှာတော့ Celebrity Trainer တစ်ဦးလည်းဖြစ် TV Personality တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Andy ကနေ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
Some people always smile because they know smiling is easier than explaining why they are sad. တစ်ချို့သောလူတွေကအမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြုံးနေခြင်းဆိုတာသူတို့ဘာကြောင့်ဝမ်းနည်းနေရလဲ ဆိုတာကိုရှင်းပြနေရတာထက်ပိုလွယ်ကူကြောင်းသူတို့နားလည်ထားလို့ပါတဲ့။ အပြုံးတစ်ပွင့် ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရည်ညွှန်း ဖော်ပြထားတဲ့စကားတစ်ခွန်းပါ။ လောကမှာရှင်သန်ရပ်တည်နေထိုင်ကြတဲ့ ပုတုဇဉ်လူသားတိုင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှ သမုဒ္ဒရာဝမ်း တစ်ထွာအတွက် ရှာဖွေရင်းလောဘမီးတွေ၊ ဒေါသမီးတွေ၊ မောဟမီးတွေနဲ့ လောင်မြှိုက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ထို့အတူလောကက ပေးတဲ့အခက်အခဲတွေ အတားအဆီးအဟန့်အတားတွေကြောင့်လည်းစင်းလုံးချောအဆင်ပြေမှု ဆိုတာအရာတိုင်းမှာမရှိနိုင်တဲ့ အတွက် ခံစားမှုပေါင်းများစွာကိုရောပျွန်းလို့ ခံစားနေရတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့သောသူတွေအတွက် လွယ်ကူလွန်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကသူတို့အတွက်မှ ခက်ခဲလွန်းတဲ့အခါမှာလည်းကျိတ်မနိုင်ခဲမရစိတ်ပျက် အားငယ်နေတာမျိုးတွေ လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကြီးငယ်မဟူ ကြုံတွေ့ရမယ့် ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုခံစားရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဲဒီစိတ်ဆင်းရဲမှု၊ ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုပပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ စိတ်ထဲကထုတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားနေမယ့်အစား စိတ်သက်သာရာ ရစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတွေးတောလုပ်ဆောင်နေကြည့်လိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးလို ဖြစ်နေတဲ့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှု တွေကိုအံတုလို့ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်က နှုတ်ခမ်းဖျားထက်မှာအပြုံးတစ်ပွင့်ကိုပန်ဆင်ထားလိုက်ပါ။
နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်မှာတော့ ပတ္တမြား FM မှ ကျွန်တော် ဇွဲမာန်နဲ့ အတူ ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ (ပဲခူး) တို့က ဆွေးနွေး တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . . ယခုတစ်ပတ်အတွက် တင်ပြဆွေးနွေးပေးမှာကတော့ တစ်ပတ်အတွင်း ထူးခြားတဲ့သတင်းများဖြစ်တဲ့ " WHO ကစေလွှတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Covid 19 စတင်ခဲ့တဲ့ မူလဇစ်မြစ်ကို ရှာဖွေတဲ့သတင်းနှင့် တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ Samsung ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ထောင်ဒဏ်ကျခံရတဲ့သတင်း " စတဲ့သတင်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်......
A person who truly love you will be angry at you for so many things but will never leave you for any reason. ကိုယ့်အပေါ် စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ချစ်ခင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြထားတဲ့စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အတွက် စစ်မှန်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့တတွေနဲ့ သံသရာတကွေ့မှာတွေ့ဆုံကြရတဲ့ လူသားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတစ်ချို့တစ်လေသောအကြောင်းအရာတွေမှာ သဘောထားခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကြီးပြင်းလာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းနောက်ခံ ခြင်းလည်းမတူညီမှုတွေ၊အတွေးအခေါ်အယူအဆလည်းမတူညီမှုတွေကြောင့် တစ်ချို့သောအခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ပြဿနာတွေ တတ်လေ့ရှိထရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးကတောက်ကဆပြဿနာတက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ့်အပေါ်စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားထားရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆုံးသတ်အချိန်မှာကိုယ့်အနားမှာပဲရှိနေပေးနေမှာပါ။ တကယ်တမ်းသံယောဇဉ်မရှိတဲ့ သူဆိုရင်တော့ တော်တန်ရုံပြဿနာနဲ့တင် ကိုယ့်အနားက ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်နေမှာပါ။ လူဆိုတာမျိုးမှာကိုယ့် အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် မည်သို့သောအကျိုးအကြောင်းတွေရှိနေပါစေဘေးနားမှာအစဉ်ထာဝရ ရှိနေပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Knowledge in 3mins
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့ အစာအာဟာရတွေ မျှတဖို့လိုအပ်သလို တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေ မြင့်မားဖို့ ဗဟုသုတတွေဖြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..... မိမိကိုယ်ကို ချစ်တယ်ဆိုရင် အချိန် (၃)မိနစ်ပဲပေးပါ... "စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်ဖို့ Research သေချာလုပ်နေပြီလား" ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး Dr. Phyo Paing (Marketing Trainer and Consultant) မျှဝေပေးထားပါတယ် ..... Knowledge in3mins ကို ပတ္တမြား FM တွင် Wednesday 11:10 AM နှင့် Sunday 11:10 AM တို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
If you cannot findacompanion to walk with, walk alone, like an elephant roaming the jungle. It is better to be alone than to be with those who hinder your progress. တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့အတူတူသွားဖို့ လက်တွဲဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ရှာမတွေ့ခဲ့ရင် တစ်ယောက်တည်းသာသွားပါ။ ဆင်တွေ တစ်တောလုံးကိုတစ်ကောင်တည်းမင်းမူသလိုပေါ့။ တစ်ယောက်တည်းရှိတာကကိုယ့်အလုပ်တွေကိုဟန့်တားမယ့်သူနဲ့ အတူရှိနေတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်တဲ့။ဒီစကားကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေသနာတော်တွေထဲကနေကောက်နှုတ်လို့ဝေမျှပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လောကရဲ့ ရှုပ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာမိမိကိုယ်ထက်ဘယ်သူကမှ အရေးမပါတဲ့အကြောင်းရယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကသာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာကိုယ်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှကိုယ့်အကြိုက်ကိုလိုက်ပြီးကိုယ့်စိတ်အတိုင်းနေထိုင်မယ့်သူဆိုတာ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရှားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက် တခြားသောသူတွေကိုမှီတွယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ဘဝအတွက် တခြားသူတွေကိုအားကိုးမနေဘဲကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကိုကိုယ့်ဘာသာလုပ်ဆောင်ပါ။ ကောင်းတာရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်သာစံစားရမှာဖြစ်သလိုမှားယွင်းမှုတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်းသွားလိုက်ပါ။ တကယ်တော့ မိတ်ဆွေသင်္ဂဟပေါများတယ်ဆိုတာမင်္ဂလာတစ်ပါးဆိုပေမယ့် အဲဒီမိတ်ဆွေတိုင်းကကိုယ့်အတွက် စစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းအရေးကြုံလာရင် ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူရှိနေမယ့်သူဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာအားကိုးပါ။ တပါးသူကိုအားကိုးအမှီပြုတဲ့စိတ်ကိုလျော့ချနိုင်သလောက်လျော့ချပါ။
လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုတွေကို သိရှိခံစားရမယ့် ပြောကြည့် အစီအစဉ်..... ဒီတစ်ပတ် ပြောကြည့် အစီအစဉ်မှာတော့ "ယောင်္ကျားလေး နှင့် မိန်းကလေး ဘယ်သူက မာယာပိုများသလဲ"ဆိုတာကို မေးမြန်းထားပါတယ်..... ပရိသတ်များရဲ့ ရင်ထဲက စကားသံများကို နားဆင်ပေးပါအုန်းနော်.... ဒီအစီအစဉ်လေးကို Radio မှာနားဆင်နိုင်သလို Padamyar FM Website & Mobile Application တွင်လည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်....
Smile more than you cry, give more than you take and love more than you hate. လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ခံစားတတ်တဲ့အသည်းနှလုံးနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် ခံစားချက်ပေါင်းများစွာကိုအသက်ရှင်သန်နေသေးသမျှကာလပတ်တစ်ခုလုံးမှာခံစားရမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါမှာ ဘဝကပေးတဲ့ အခက်အခဲတွေကြောင့် ငိုကြွေးခဲ့ရတာတွေလည်းရှိမှာ ပါ။ လူ့ဘဝကိုစတင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကတည်းက ငိုကြွေးခြင်းနဲ့ပဲစတင်ခဲ့သလို၊ နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်သေခြင်းတရားမှာလည်းမျက်ရည်စတွေနဲ့သာအဆုံးသတ်ကြတာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငိုကြွေးခြင်းဆိုတာလူသားတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအရှိဆုံးအရာပါပဲ။ဒီတော့ ငိုကြွေးရတဲ့ခံစားချက်အရသာကိုလူသားတိုင်းသိကြပါတယ်။ ပူဆွေးခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းတွေ နဲ့ ငိုကြွေးကြတာများတဲ့အတွက် တကယ်တော့ငိုကြွေးခြင်းဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုအပူမီးတွေနဲ့ စွဲဟပ်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာ ကောင်းမွန်စွာရှင်သန်နေရင်းနဲ့ အေးချမ်းမှုအစစ်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တတ်နိုင်သမျှပြုံးပြုံးလေးသာနေပါ။ အခက်အခဲတွေကြုံရပါစေ။ အတိဒုက္ခတွေရောက်နေပါစေ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းခြင်းကိုသာဆောင်စေမယ့် အပြုံးကိုသာ နှုတ်ခမ်းဖျားထက်မှာမွေးမြူထားပါ။ မိမိကိုယ်တိုင်ရောတပါးသူကိုပါအေးမြခြင်းကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
If it’s challenging you, testing you, and pushing you. It’s helping you become more of who you’re meant to be. သင့်ကိုစိန်ခေါ်နေတာ၊ စမ်းသပ်နေတာ၊ တွန်းပို့နေတာတွေက သင့်ကိုသင်ဖြစ်လာမယ့်အတိုင်းအတာအထိ ပိုပြီးဖြစ်လာဖို့ ကူညီ ပေးနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒီစကားကတော့ ဘဝမှာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကြောက်ရွံ့ပြီး ကျော်ဖြတ်ဖို့ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတဲ့ လူသားတွေအတွက် အသိပေးထား တဲ့ စကားတစ်ခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် သူ့အရွယ်အလိုက် သူ့ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေအလိုက် စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ စမ်းသပ်မှုတွေကို တွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာလည်း ကလေးဘဝအတွက် စမ်းသပ်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိ နေသလို၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့သူတွေမှာလည်း နေ့စဉ်တိုင်းနီးပါးမှာ အခက်အခဲ တွေအတားအဆီးတွေဆိုတာ ကို တွေ့ကြုံရတာပါပဲ။ နောက်ဆုံး ခန္ဒာဝန်ကိုယ်မချခင်အထိ အသက်ဆက်ရှင်ချင်ကြတဲ့ လူသား တွေနဲ့ လောကရဲ့အမှန်တရား သေမင်းတို့က စစ်တလင်းမှာ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာပါပဲ။
ပရိသတ်များအားလုံး မင်္ဂလာပါ... ခု တင်ဆက်ပေးမဲ့ အစီအစဉ်က ခေတ်လူငယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာ ကွဲပြားခြားနားပြီးတော့ ထူးခြားစုံလင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ့်အနီးအနားနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ...ဒါ့အပြင် ကိုယ်မသိသေးတဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်အဖုံဖုံကို သုတ ၊ ရသ စုံလင်စွာနဲ့ တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ... ယခုတစ်ပတ်အတွက် Environment နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းကို environmental engineering ဘာသာရပ်ကို Ph D သင်ယူနေတဲ့ ကိုကောင်းထက်စွမ်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ ကဲ... ဒီတော့ အားလုံးပဲ ခေတ်နဲ့အဆက်မပြတ်ရအောင် ခုပဲ နားဆင်ကြည့်လိုက်ပါနော်.
Your wings already exist. All you have to do is fly. သင့်မှာအတောင်ပံတွေရှိပြီးသားပါ။ သင်လုပ်ရမှာကပျံသန်းဖို့တစ်ခုပါပဲတဲ့။ ဒီနေ့အတွက်စကားကိုကြားလိုက်တော့ ကိုယ့်နောက် ကျောမှာပဲအတောင်ပံတွေပေါက်နေပြီလားဆိုပြီး ပြန်စမ်းမိနေပါသလားဗျာ။ ကျွန်တော်ကစတာပါ။ ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်လေး ထူးခြားတဲ့ ဒီစကားကတော့ ဝင်္ကဝုတ္တိအလင်္ကာသဘောနဲ့ သွယ်ဝှိုက်ရေးသားပြောဆိုထားတာဖြစ် ပါတယ်။ တည့်သဘော ဘာသာ ပြန်နားလည်လို့တော့မရပေမယ့် ဒီစကားရဲ့ အတိမ်အနက်ကသေသေချာချာလေးစဉ်းစားကြည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် တော်တော်လေး နက်ရှိုင်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ ဟိုးမိုးကောင်းကင်မှာလေဟုန်ကိုခွင်းလို့ ပျံသန်းနေကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ကြည့်ပါ။ သူတို့မှာလေဟုန်ကိုခွင်းပြီးပျံသန်းနိုင်ဖို့ အတွက် တောင်ပံတွေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ထက် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ဖြစ်တည်ပုံလည်း ရှုပ်ထွေးပြီးအရာရာမှာအဆင့်မြင့်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာလည်းကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ၊ ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ဒေသကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
Makeup doesn’t make you prettier. Money doesn’t make you richer. Because real wealth and real beauty depends on how you value yourself. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်ရှိလူသားတိုင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလိုချင်ကြပါတယ်။ ထို့အတူပဲလှပတင့်တယ်မှုကိုလည်း မြတ်နိုးခုံမင် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက် ကြိုးစားကြတယ်။ ငွေကြေးတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းကြတယ်။ ထို့ အတူပဲ။ လှပတင့်တယ်တာကို မြတ်နိုးခုံမင်ကြတဲ့အတွက် ပင်ကိုယ်လှပြီးသားသူကလည်းပိုပြီးလှအောင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ နဂိုအလှမရှိတဲ့သူကလည်း ဝတ်ကောင်းစားလှတွေဝတ်၊ တန်ဖိုးကြီးအလှပြင်နည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလှအောင်ဖန်တီးကြပြန်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် လောကမှာသေချာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ ငွေကြေးတွေကိုယ့်မှာကျိကျိတက်ရှိနေရုံနဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာ ခြင်းအစစ်အမှန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ ယူဆလို့ မရပါဘူး။
ဘဝမှာသေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကြားက ဖြတ်သန်းရမယ့် နေ့ရက်တွေအတွက် အသင့်ဖြစ်နေဖို့ The Life အစီအစဉ်ကစောင့်ကြိုနေပါတယ်..... ဒီတစ်ပတ်မှာကော ဘယ်သူရဲ့ဘဝ အမှတ်တရ၊ ဒဿန တွေကို နားဆင်ရမှာလဲ...? ထိမိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို အလှဆင်တဲ့သူ၊ သီချင်းတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ပေါ်လွင်စေခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းတွေကိုရေးစပ်သီကုံးသူ တေးရေးစိမ့် ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်....
နေ့စဉ် လူမူဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် အကြံပြုချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးသွားမယ့် Let's Do It အစီအစဉ်..... ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မငုဝါနှင့် မအိဆုတို့က လွယ်ကူပြီး လက်တွေ့အသုံးပြုလို့ရမယ့် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေ ဝေမျှထားလဲဆိုတာကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... Let's Do It အစီအစဉ်ကို Tuesday, Thursday, Friday ၊ မနက် 11:10 အချိန်တွင် စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်....
I am in competition with no one. I run my own race. I have no desire to play the game of being better than anyone. I just aim to improve, to be better than I was before. That’s me, and I’m free. Care Free၊ Stress Free ဆိုတဲ့ ပူပန်မှုကင်းတဲ့၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကနေ ကင်းဝေးတဲ့ဘဝကို လိုချင်ကြတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်း ကောင်းတစ်ခုက ဒီနေ့အတွက်စကားမှာပါဝင်နေပါတယ်။ငါဘယ်သူနဲ့မှလိုက်ယှဉ်ပြိုင်မနေပါဘူး။ ငါ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲအတိုင်းသာ ငါပြိုင် နေပါတယ်။ တခြားသူထက်သာရမယ်ဆိုတဲ့ ကစားနည်းကိုလည်းကစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းကငါထက် အခုငါပိုပြီး တိုးတက်ဖို့ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါဟာလွတ်လပ်တဲ့ ငါပါပဲ။ ကျွန် တော်တို့တတွေ လောကကြီးမှာရှင်သန်ရုန်းကန်နေရင်းနဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟမီးတွေ၊ မလိုခံခက်ခံစားချက်တွေ၊ မစ္ဆာရိယမနာလိုမှုတွေကိုခံစားရင်းနဲ့ အပူကြီးပူနေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူဖြစ်လာပြီဆိုတာကတကယ့်ကိုမှ ကုသိုလ်ကံတရားအကျိုးပေးကောင်းလွန်းလို့ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီလိုမျိုးလူ့ဘဝမှာ ဘာရယ် မဟုတ်ဘဲအပူမီးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းရင်းအဓိပ္ပာယ်မရှိအချိန် တွေကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိကုန်ဆုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ လူဖြစ်လာရတဲ့ ဘဝက အလကားပဲဖြစ်နေတော့မှာပါ။
ပတ္တမြား FM ပရိသတ် အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ...... အစိမ်းရောင်ချစ်သူ အစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပရိသတ်များအတွက် ကမ္ဘာမြေကြီး ရှင်သန်ရပ်တည်ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းစိုပြေရန် အတွက် သစ်ပင်၊သစ်တော များရဲ့ အရေးပါပုံကိုဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်မျှဝေပေးထားပါတယ်......
နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ချက် အစီအစဉ်မှာတော့ ပတ္တမြား FM မှ ကျွန်တော် ဇွဲမာန်နဲ့ အတူ ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ (ပဲခူး) တို့က ဆွေးနွေး တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . . . ယခုတစ်ပတ်အတွက် တင်ပြဆွေးနွေးပေးမှာကတော့ "ငွေနှင့်အာဏာ - အလီဘာဘာရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဂျက်မား နှင့် တရုတ်သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်" တို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်......